Ibhodi yeSiko lomdlalo weKhadi lokuShicilela uMvelisi | HS Boardgame Printing
I-HS ibonelela ngoshicilelo lomdlalo webhodi kunye nokupakishwa kwenkonzo elungiselelwe oko ukusukela ngo-2002.
Ukupakishwa kweMidlalo yeBhodi
Ushicilelo lweNcwadi yeMifanekiso
Ukupakishwa kwebhokisi yePhepha
Iminyaka eyi-18 yokupakishwa kobuchwephesha kunye nomenzi womdlalo webhodi yesiko
Uyilo olulungiselelweyo lokushicilelwa kwemveliso kunye nokupakishwa, yenza ipakethe eyodwa kumfanekiso webrand yakho kwaye uphucule ukuthengiswa kwemveliso yakho. Inkampani yokushicilela ye-HS boardgame inamaqela angaphezu kwama-40 oyilo lokupakisha, ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava eshishini, elungiselelwe iimfuno zakho, kuphela imveliso yakho eyenziwe ngokwezifiso yabucala, eyaliwe ukufana, iimveliso ezithengiswa eJapan, eJamani, eUnited States nakwezinye iindawo. kumazwe, isiphumo uyilo sele yamkelwa ngokubanzi.
I-Hongsheng, Njengomnye wawona makhadi oshicilelo afanelekileyo kunye nomenzi webhodi yesiko e-China, Ikakhulu ikhethekileyo kushicilelo lomdlalo webhodi, ushicilelo lwencwadi yemifanekiso, ushicilelo lwencwadi olunamacala amathathu, iithoyi zokufundisa ze-elektroniki zabantwana, izixhobo zokufundisa, iibhokisi zemibala ye-boutique, kunye nomgangatho ophezulu- iibhokisi isipho ekupheleni etc, professional ukubonelela abathengi ngeentlobo ngeentlobo zeemveliso eziprintiweyo.
I-OEM Tailor Yenziwe iKhadi lokuDlala Umdlalo weBhodi yoShicilelo yesiko losapho
Ukusukela ngo-2002, njengomvelisi othe ngqo kunye nochwephesha we-OEM/ODM kunye nomthengisi ngaphandle e-China, i-HongSheng Manufactory ekhethekileyo ekuveliseni imidlalo yebhodi, imidlalo yamakhadi, amakhadi okudlala, amacandelo omdlalo kunye nebhokisi yokupakisha.
Ushicilelo lwaseHongsheng-uMgangatho oPhezulu oKhethekileyo oKhethekileyo we-PET ocacileyo wefestile yebhokisi yokupakisha enehuku yeplastiki engamaqela
Ubukhulu becala, inkangeleko yeeBhokisi zePhepha, iimpawu, iipakethe, njl.njl. inokuba zizinto ezibalulekileyo ezitsala abathengi. Kwinkqubo yophuhliso loshicilelo lomdlalo webhodi, ushicilelo lwebhokisi yemibala, ibhokisi yephepha, incwadi, abaqulunqi bethu balandela intsingiselo yamva nje kunye nokuhlalutya izinto ezithandwa ngabathengi, ngaloo ndlela, besenza umdlalo webhodi woshicilelo, ushicilelo lwebhokisi yombala, ibhokisi yephepha, incwadi eyodwa. kwisakhiwo sayo kunye nesimbo soyilo. Ngokumalunga neempawu zayo, sizama ukuyenza ibalasele ngokwamkela izixhobo ezikumgangatho ophezulu.
Ushicilelo lwaseHongsheng-Ibhokisi yexabiso lomzi-mveliso wesiko loMgangatho oPhezulu wefowuni yokupakisha ibhokisi umenzi wephepha lokupakisha Ibhokisi yesiko lephepha
Ibhokisi yexabiso lomzi-mveliso wesiko lomgangatho ophezulu Umgangatho ophakamileyo wetyala lefowuni yokupakisha ibhokisi umenzi wephepha lokupakisha uphumelele ingqalelo ephezulu kunye nendumiso evela kubathengi.Ubuchwephesha busetyenziselwa ukuhlangabezana nemfuno yemarike.Ngokuqinisekileyo iya kwamkela umoya okhethekileyo kunye nencasa yabathengi.
Ushicilelo lwaseHongsheng-Umgangatho ophezulu wephazili yomdlalo wangaphakathi kunye namakhadi oshicilelo lwe-CMYK lwabantwana Intengiso eshushu.
Ngokwenyani, ukushicilelwa komdlalo webhodi, ukuprintwa kwebhokisi yombala, ibhokisi yephepha, ukusebenza kwencwadi kunye nomgangatho wayo ubukhulu becala kugqitywe ngemathiriyeli yayo ekrwada. Ngokumalunga nemathiriyeli ekrwada yoMdlalo weBhodi, badlule kuvavanyo oluninzi kwizinto zabo zekhemikhali kunye nokusebenza. Ngale ndlela, umgangatho wemveliso uqinisekisiwe ukusuka kumthombo. Okwangoku, imveliso ivavanyiwe ukuba yeyobuhle kunye nezinye iipropati.
Hongsheng Custom Ibhodi Game Card Printing Manufacturer
Kutheni ukhethe thina
Yenza umfanekiso okhethekileyo wegama lokupakishwa kwakho, phucula amandla okuthengisa imveliso.
Sinamaqela angaphezu kwama-40 anamava oyilo lokupakisha kunye neminyaka engaphezu kwe-10 yamava oshishino. Sinokwenza iimveliso zethu ngokweemfuno zethu. Senzela wena kuphela. Siyala ukufana.
Iimveliso zithengiswa kakuhle eJapan, eJamani, e-US nakwamanye amazwe, kwaye isiphumo soyilo siye samkelwa ngokubanzi.
Igxininise kushicilelo lwekhadi lomdlalo webhodi yesiko kunye nokupakishwa iminyaka eyi-19, inkampani yaseJapan yokudlala ikhethe iqabane. Ikomkhulu laseDongguan lineemitha ezizikwemitha ezingama-8,500 zezakhiwo zomzi-mveliso ezinamandla kunye nabasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobuchule abangaphezu kwama-300. NgoSeptemba 2017, isebe le-Huizhou, eligubungela indawo engaphezu kwe-20,000 yeemitha zesikwele, lafakwa ngokusemthethweni ekusebenzeni. Uphumelele amawonga amaninzi anje “ngoMboneleli oGqwesileyo wePhondo laseGuangdong”, “iSatifikethi soVavanyo loMboneleli”, “iMbasa yeSibhobhobhobho yeeBoss eziPhezulu kwiSithili saseGuangzhou”, “IiMbasa zeBhosi eziPhezulu zeSibhozo”, Ngokuhambelana nenkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001 ishishini.
I-HAMA kunye nenkampani yethu ifikelele kwisivumelwano sentsebenziswano sexesha elide
I-Hongsheng ibonelela ngekhadi lomdlalo webhodi yesiko loshicilelo kunye nesisombululo sokupakisha!
Ukusukela ekusekweni kwayo ngo-2001, inkampani yoshicilelo yebhodi ye-HS isekwe kumgaqo othi "umthengi kuqala, umgangatho wokuqala; ukugqwesa, ukuphuculwa okuqhubekayo." Ngokusekelwe kwimarike, iphumelele ukuthembela kunye nenkxaso yabathengi abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Isekwe inkqubo yomgangatho ogqibeleleyo ngo-2009, yaphumelela isiqinisekiso se-ISO9001:2015 inkqubo yolawulo lomgangatho wamazwe ngamazwe, yandisa isikali sayo ngo-2010 ukuze igubungele indawo eyi-8,500 square metres, yavula isebe eHuizhou ngo-2017, iquka indawo engama-30,000. square metres, kwaye okwangoku inabasebenzi abamalunga nama-600 , Kukho 3 izahlulo zamashishini: isebe lebhodi yomdlalo webhodi, isebe loshishino lweethoyi ze-elektroniki zezemfundo, isebe loshishino lokupakishwa kwe-boutique.
Umda weshishini loshicilelo: imidlalo yebhodi, iincwadi zemifanekiso, iincwadi ezinomacala amathathu, iithoyi zokufundisa ze-elektroniki zabantwana, izixhobo zokufundisa, iibhokisi zemibala ye-boutique, iibhokisi zesipho eziphezulu, zibonelela ngobuchwephesha abathengi ngeemveliso ezahlukeneyo eziprintiweyo. Izixhobo zokuvelisa: umatshini wokushicilela we-Heidelberg, umatshini we-oyile, umatshini wokupolisha, umatshini wokulambisa, umatshini webhiya, umatshini wokubumba inaliti, i-SMT, umatshini wokubopha ucingo, umatshini we-blister, umatshini wedijithali, ibhedi yokusika, umatshini wokugoqa, njl. Ukuqinisekiswa komgangatho: kunye nesethi epheleleyo. wezixhobo zokuvavanya umgangatho kunye neqela lobuchwephesha lobuchwephesha lokuqinisekisa umgangatho weemveliso zoshicilelo zabathengi.
Shiya nje i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhagamshelwano ukuze sikuthumelele isicatshulwa sasimahla kuluhlu lwethu olubanzi loyilo!
Copyright © 2022 Dongguan Hongsheng Printing Co., Ltd. - www.hsboardgame.com All Rights Reserved.
Thumela ingxelo yakho
Igama I-imeyile Impazamo yefomathi Ifowuni/WhatsApp Igama leKhampani